Horohoron-tany: Milamina ve ny mpizahatany ao amin'ny Nosy Cayman?
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Horohoron-tany: Milamina ve ny mpizahatany ao amin'ny Nosy Cayman?
Hatraiza ny maha-azo antoka ireo mpitsidika ny Nosy Cayman aorian'ny horohoron-tany 7.7 androany?
Ny paradisa mpizahatany ao amin'ny nosy Cayman dia nanozongozona ny vokatry ny horohoron-tany nahatratra 7.7 avy tany 80 kilaometatra avaratra atsinanan'ny George Town, hoy ny Government Information Services. Ny vaovao farany momba ny toe-javatra any amin'ny Nosy Cayman taorian'ny horohorontany sy ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Cayman Island dia notaterina.
Toa fahagagana ho an'ny Nosy Cayman izy io.
Ireo fakantsary amoron-dranomasina amin'ny a Cayman Islands ala nenina taorinan'ny horohorontany dia nampiseho mpitsidika, nilomano, fialantsasatra. Vao izao dia toa nilaozana ny morontsiraka afa-tsy ny tovolahy 2. Tsy nisy na iray tamin'ireo toeram-pialan-tsasatra fialan-tsasatra na hotely nitatitra fahasimbana na ratra
Ny manampahefana ao amin'ny seranam-piaramanidina Cayman Islands dia miasa toy ny mahazatra amin'izao fotoana izao, saingy nesorina ny tobin'ny seranam-piaramanidina ary tapaka ny sidina nandritra ny horohorontany tamin'ny talata tolakandro. Ny tobin'ny seranam-piaramanidina rehetra dia nojerena noho ny fahasimbana, anisan'izany ny lalamby, aprona ary zotram-by. Vantany vao voamarina fa tsy nisy fahasimbana ny seranam-piaramanidina, nitohy toy ny mahazatra ny fandehanana amin'ny sidina.
Simba ny lalana any amin'ny Nosy Cayman
Ny orinasa sasany ao George Town dia nisafidy ny hanidy aloha taorian'ny horohorontany androany tolakandro.
Nilaza ny mpitondra tenin'ny Water Water fa mahazo tatitra bebe kokoa momba ny fahatapahana ny orinasa ary mandinika ny olana ny ekipany ary hanana fanavaozana tsy ho ela.
Hakatona ny sekolim-panjakana ny alarobia izao Nakatona ireo sekoly hahafahana manao tombana amin'ny rafitra, hoy ny Hazard Management Cayman Islands.
Ny Red Cross fialofana amin'ny Huldah Avenue, George Town dia hisokatra amin'ny 6.30 hariva.
Ny praiminisitra sy ny governora androany tolakandro dia niseho tao amin'ny CIGTV mba hanamafisana fa lany ny fandrahonana tsunami. Ny praiminisitra Alden McLaughlin, "fantatro fa be ahiahy sy taitra ny olona ary nisy fahasimbana ara-drafitra tao an-tranoko," hoy izy.
"Amin'ny fahatsapana fankasitrahana lalina no ilazako fa tsy toa nisy naratra ary tsy afa-bela tamin'ireto ratsy indrindra natao izahay."
Hoy izy: "Fantatro fa hetsika nampatahotra anay rehetra teto amin'ny nosy tamin'ity vanim-potoana ity fa ambany ny risika amin'ny tsunami fa amporisihana ny mponina hifindra amin'ny rihana faharoa na avo kokoa ho fitandremana."
Nanampy izy fa tokony ho fantatry ny olona ny fandrahonana amin'ny horohoron-tany.
Ny governora dia nanondro fa nisy fahasimbana ara-drafitra teo amin'i Cayman Brac sy Grand Cayman. Nilaza izy fa ny sampan-draharaha mpamono afo sy ny asa vaventy dia mamaly ireo tranga ireo.
Ny praiminisitra Alden McLaughlin dia niresaka fohifohy tamin'ny bulletin nanao hoe: “Manao izay azonay atao izahay mba hiresahana amin'ny besinimaro amin'ny besinimaro arak'izay tratranay.”
Nilaza izy fa tranokala Hazard Management www.fandrefaria.gov.ky no loharano tsara indrindra ho an'ny vaovao ofisialy.
Ny Cayman Airways dia nampiato ny serivisy tsy ilaina rehetra dia naato nandritra ny andro. Ireo biraon'ny tapakila ao amin'ny Grand Cayman, Cayman Brac ary Little Cayman, ary koa ny foibem-pifaneraseran'ny Cayman Airways Reservations, dia hakatona hatramin'ny alarobia.
Hitohy anio sy rahampitso araka ny fandaharam-potoana ny sidina rehetra, hoy ny fampitam-baovao avy amin'ny CAL.
Ny Nosy Cayman, Teratany ampitan-dranomasina britanika, dia misy nosy 3 ao amin'ny Ranomasina Karaiba andrefana. Grand Cayman, nosy lehibe indrindra, dia fantatra amin'ny toeram-pialan-tsasatra amoron-tsiraka sy toerana fitsidihana scubael sy snorkeling isan-karazany.
Cayman Brac dia toerana fanombohana malaza amin'ny fitsangantsanganana an-dranomasina lalina. Little Cayman, nosy kely indrindra, dia misy bibidia isan-karazany, manomboka amin'ny iguanana tandindomin-doza ka hatramin'ny voron-dranomasina toy ny booby tongotra mena.
Fanavaozana ny horohoron-tany Kiobà ho an'ireo mpizahatany
Ny governemanta India dia te hiala amin'ny orinasa Air India